Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons » Njem nlegharị anya ọhụrụ nke Turkey lekwasịrị anya na agbamakwụkwọ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Resorts • Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Turkey na -agbasa News
Njem nlegharị anya agbamakwụkwọ na-enye ọtụtụ uru akụ na ụba ma na-atụnye ụtụ n'ụzọ akụ na ụba na ebe aga na akụkụ dị iche iche na mpaghara njem nlegharị anya.
Ka mba na-amalite ịgbalị ịgbake na COVID-19, Turkey etinyela uche ya na njem nlegharị anya agbamakwụkwọ.
Otu onye otu bọọdụ nke Association of Turkish Travel Agency kwuru na agbamakwụkwọ na-erite uru karịa ụdị njem ọ bụla ọzọ.
Ndị nwe agbamakwụkwọ mba ụwa na-egosiwanye mmasị maka obodo ndị njem nlegharị anya nke Mediterranean Mediterranean na Aegean.
Network Tourism Network (WTN) na Nancy Barkley, Onye nhazi WTN maka njem nlegharị anya agbamakwụkwọ, na-akwado mpaghara njem nlegharị anya nke Turkey ka ọ na-atụgharị na òtù agbamakwụkwọ mba ụwa iji nọgide na-agbake na ọrịa COVID-19.
N'afọ 2019, ego ndị njem nlegharị anya Turkey erutela ihe ruru ijeri US $ 34.5 yana ihe karịrị nde ndị ọbịa si mba ọzọ 45. Na 2020, agbanyeghị, mfu obodo ahụ ruru 70% n'ihi ọrịa na-efe efe nke COVID-19. Taa, Turkey njem nlegharị anya ngalaba na-atụgharị na òtù agbamakwụkwọ mba ụwa n'afọ a iji nọgide na-agbake site na mmetụta ọjọọ nke ọrịa na-aga n'ihu.
"Ụlọ ọrụ agbamakwụkwọ na-erite uru karịa ụdị njem nlegharị anya ndị ọzọ," Nalan Yesilyurt, onye otu bọọdụ nke Association of Turkish Travel Agency, gwara Xinhua. "Ego a na-emefu n'ime otu izu naanị n'ime ụlọ ọrụ dị otú ahụ hà nhata ihe ndị njem nlegharị anya na-emefu n'otu ọnwa."
O kwuru na ndị nwe agbamakwụkwọ si mba ọzọ na-ahọrọwanye obodo Turkey Mediterranean na Aegean nke na-enye ọrụ "pụrụ iche na nke pụrụ iche" na ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke elu, marinas na ụlọ nri. "Bodrum (nke dị na ndịda ọdịda anyanwụ mpaghara Mugla) na-enwu dị ka kpakpando nke nwere ndụ abalị ya mara mma, ụgbọ mmiri tozuru oke, nke na-adọta ụgbọ mmiri jet ọha na ụlọ nri nwere ndị isi nri ama ama," Yesilyurt kwuru.
Onye isi obodo Bodrum Ahmet Aras kwuru na Bodrum na-achọsi ike n'ọtụtụ mba Europe na Far Eastern, na ọ na-enwetakwa nkwanye ùgwù site na mba Arab na Middle Eastern. Obodo a nwere nnukwu ụlọ oriri na ọṅụṅụ boutique nwere ihe karịrị 1,000 akwa.
O kwuru, "N'agbanyeghị ọnọdụ ọrịa na mgbochi ọrịa, Bodrum nabatara òtù agbamakwụkwọ 6 si India n'afọ a, bụ ndị na-ekwe nkwa maka ọdịnihu." Obodo a na-eme mkparịta ụka na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ahazi mba ụwa iji nwetakwuo emume agbamakwụkwọ n'oge na-abịa.
"Inwe emume agbamakwụkwọ mba ofesi n'oge na-adịghị anya mgbe ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-anọ na họtel dị ala, na-enye aka na mpaghara njem nlegharị anya na Bodrum, na-enweta ego na ịkwalite ohere ọrụ. Ndị ọbịa na-abịa Bodrum maka agbamakwụkwọ abụghị nanị na ha na-etinye oge ha n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ ha kamakwa na-aga ịzụ ahịa na iri nri, na-eme ọtụtụ ihe omume, "Ọ gbakwụnyere.
Ememe agbamakwụkwọ ndị India na-abara ndị obodo uru nke ukwuu n'ihi na ndị nwe agbamakwụkwọ na-akwụghị ụgwọ ọ bụla iji mee ka obi dị ndị ọbịa ha mma, ka onye isi obodo kwuru. Ọ gbakwụnyere, "Ha na-edobekarị ụlọ oriri na ọṅụṅụ niile maka ndị ọbịa ha, bụ ndị ji nnukwu ụgbọ elu a na-akwụ ụgwọ na-abịa n'obodo ahụ."
Ha na-anọkarị otu izu ma na-enwe ọmarịcha ihe okike na omenala nke mpaghara ahụ. Ịgbazite ụgbọ mmiri na ime njem nlegharị anya ụgbọ mmiri iji hụ ọdụ ụgbọ mmiri a na-emetụghị aka na-aghọ ihe omume kachasị ewu ewu n'etiti ndị ọbịa.
Na mgbakwunye na ụgbọ elu mba ụwa ozugbo sitere n'akụkụ dị iche iche nke ụwa n'oge na-abịa n'ọdụ ụgbọ elu Bodrum, obodo ahụ na-atụ anya ịdọrọ ọtụtụ "ndị njem nlegharị anya okomoko."
Mgbasa ngwa ngwa nke ikpe COVID-19 kwa ụbọchị n'ofe mba ahụ, na-echegbu ndị nnọchi anya njem nlegharị anya na ndị isi obodo. "Nkagbu ndoputa ọ bụla ga-apụta nnukwu mfu maka ụlọ ọrụ ahụ dum," Aras kwuru.
Banyere Network Tourism Network
World Tourism Network (WTN) bụ olu agafeela ogologo oge nke obere azụmaahịa na njem nlegharị anya n'ụwa niile. Site n'ijikọta mbọ, ọ na-ebute mkpa na ọchịchọ nke obere azụmaahịa na ndị na-azụ ahịa na ndị na-etinye aka na ha. Netwọk njem nlegharị anya ụwa si na mkparịta ụka rebuilding.travel pụta. Mkparịta ụka rebuilding.travel malitere na Maachị 5, 2020, n'akụkụ ITB Berlin. A kagburu ITB, mana rebuilding.travel bidoro na Grand Hyatt Hotel na Berlin. Na Disemba, rebuilding.travel gara n'ihu mana ahaziri ya n'ime ọgbakọ ọhụrụ akpọrọ World Tourism Network. Site n'ịkpọkọta ndị otu nzuzo na ọha na eze na nyiwe mpaghara na ụwa niile, WTN abụghị naanị na-akwado ndị otu ya kama na-enye ha olu na nnukwu nzukọ njem nlegharị anya. WTN na-enye ohere na ịkparịta ụka n'Ịntanet dị mkpa maka ndị otu ya na mba 120. Pịa ebe a ka ịbụ onye otu.